Raqiis Ma Qallaji Double Roller Extrusion Xarunta Bacriminta Shirkadaha Mashiinka Mashiinka & Warshadda | YiZheng
Waa maxay Qalabaynta Bacriminta Isku-darka Roll Extrusion?
Ku Roll Extrusion Xarunta Bacriminta Granulator Mashiinka waa mashiinka kala soocida bilaa qalalan iyo qalab casriyeysan oo qalalan oo heer sare ah. Waxay leedahay faa'iidooyinka tikniyoolajiyadda horumarsan, naqshad macquul ah, qaab dhismeed is haysta, cusbooneysiin iyo utility, isticmaalka tamarta oo hooseeya. Waxay taageeri kartaa qalabka u dhigma, sameynta khad yar oo wax soo saar si loo gaaro awood gaar ah oo soo saar joogto ah, wax soo saar mishiin ah.
Mabda 'Shaqada Of Roll Extrusion Xarunta Bacriminta Granulator
Roll Extrusion Xarunta Bacriminta Granulator Mashiinka wuxuu ka tirsan yahay qaabka isdaba-marinta, wuxuu qaadanayaa tiknoolajiyada qallalan ee qallalan si loogu cadaadiyo walxaha budada ah qaybaha. Qalabaynta wargeeyska qalalan ee qalalan waxay badanaa kuxirantahay habka cadaadiska dibedda si loogu qasbo qalabka maraya farqiga u dhexeeya labada rollers ee is rogaya si loo cadaadiyo qaybaha. Inta lagu guda jiro hawsha rogid, cufnaanta walxaha dhabta ah waxaa lagu kordhin karaa 1.5 ~ 3 jeer si loo buuxiyo shuruudaha xoogga walxaha qaarkood. Qiyaasta kala-soocida mashiinkan waa mid sare, oo si ballaaran loogu adeegsadaa kala-soocidda bacriminta isku-dhafan, daawada, warshadaha kiimikada, quudinta, dhuxusha, metallurgy iyo qalabka kale ee ceyriinka ah, waxayna soo saari kartaa isku-uruurinta kala duwan, noocyo kala duwan (oo ay ku jiraan bacriminta dabiiciga ah, bacriminta aan dabiici ahayn, bacriminta noolaha, bacriminta birlabta, iwm) bacriminta isku dhafan.
Maxaad Noogu Dooranaysaa Mashiinka Xakamaynta Bacriminta Xarunta Wadajirka?
Our warshad u heellan inay bixiso qalabka granulation bacriminta organic & xarunta iyo adeegga tikniyoolajiyadda ee adeegsadayaasha, oo ay ku jiraan naqshadeynta guud ee wax soo saar sanadle ah oo ah 1-100,000 tan oo aan lahayn qalab qalajinta, soo saarista noocyo hagitaan farsamo oo dhammaystiran, hawlgal, dhammaanba hal adeeg.
Waqtigan xaadirka ah, ka dib horumarinta sannado badan oo waayo-aragnimo ah soo saarista qalab badan oo mashiinka bacriminta bacriminta, qaadashada wax-soo-saarka tayo sare leh ee ka hortagga-daxalka, soo-saar taxaddar leh, wuxuu leeyahay faa'iidooyinka muuqaalka quruxda badan, hawlgalka fudud, isticmaalka tamarta yar, nolosha adeegga muddada dheer, heerka sare ee hadhuudhka, mashiinka granule bacriminta gudaha oo horumarsan, alaabooyinka waddanka oo dhan, taxanaha granulator ayaa lagu dabaqi karaa noocyo kala duwan.
Faa'iidada Mashiinka Qalabka Bacriminta ee Bacriminta Qalabka
1. Iyadoo aan lagu darin wax, budo qalalan ayaa si toos ah loo kariyaa.
2. Awoodda 'granular' waa lagu hagaajin karaa adoo hagaajinaya cadaadiska rooga, xakamaynta xoogga alaabooyinka ugu dambeeya.
3. Hawlaha wareegga si loo gaaro wax soo saar isdabajoog ah.
4. Maaddooyinku waa kuwo xoog ku muquuninaya wax ku beddelashada cadaadis farsamo, iyada oo aan lagu darin wax kasta, daahirnaanta sheyga ayaa la damaanad qaadayaa.
5. Budada qallalan si toos ah ayaa loo kariyaa iyada oo aan la marin habka qalajinta ee dabagalka ah, habka wax soo saarka ee hadda jira ayaa fududahay isku-duubni & isbedel.
6. Awoodda cufanku waa sarreysaa, marka la barbar dhigo hababka kale ee guntinta, hagaajinta cufnaanta jilicsanaanta waa muhiim ， gaar ahaan munaasabadda halkaas oo lagu kordhinayo saamiga wax soo saarka.
7. Noocyo fara badan oo ceyriin ah ayaa loo isticmaali karaa granulating, xoogga granular si xor ah ayaa loo hagaajin karaa iyadoo loo eegayo qalabka kala duwan.
8. Qaab dhismeedka is haysta, dayactir fudud, hawlgal fudud, geedi socod gaagaaban, isticmaalka tamarta oo hooseeya, waxtarka sarreeya, heerka guuldarraysiga oo hooseeya.
9. Xakamee wasakheynta deegaanka, yareynta qashinka iyo bacaha kharashaadka, iyo kor u qaadida awooda wax soo saarka badeecada.
10. Qaybaha gudbinta ee waawayn waxay adeegsadaan waxyaabo daawaha tayo sare leh leh. Bir daxal lahayn, titanium, chromium iyo aalado kale oo dusha sare ah oo si weyn u wanaajiyey iska caabbinta, iska caabbinta daxalka, heerkulka sarreeya iyo awoodaha cadaadiska, si mashiinkani u leeyahay nolol adeeg dheer.
Dulmar guud oo ah Khadadka Waxsoosaarka Bacriminta Qaybta Bacriminta ee Qalalan Laablaab Laab Laabla'aan
YiZheng culus Makiinado Co., LTD waxay bixin kartaa nashqadeynta hanaanka waxayna siineysaa Nidaamka DHAMMAAN ee soo saarista bacriminta isku dhafan.
Tani Laynka qallajinta Double Roller Extrusion Compound Bacriminta Granulation Production Line waxay soo saari kartaa bacriminta isku dhafan ee sare, dhexdhexaad iyo hooseeya ee dalagyada kala duwan. Iyada oo leh granulator laba-geesood ah si loo soo saaro granules, khadka wax soo saarka uma baahna habka qalajinta, isagoo leh maalgashi yar iyo awood yar oo isticmaalka. Rollers saxaafadda ee granulator waxaa loo qaabeyn karaa si ay u sameeyaan qaabab iyo cabbir kala duwan oo qalabka. Khadku wuxuu ka kooban yahay mashiinka batching-ka otomaatiga ah, qalabka wax lagu raro suunka, qalabka wax lagu qaso, saxanka weelka, granulators-ka extrusion, mashiinka baaritaanka wareega, bakhaarada alaabta lagu dhammeeyo, iyo mashiinka wax lagu xiro. Waxaan diyaar u nahay inaanu soo bandhigno qalabka bacriminta ee ugu kalsoonida badan iyo xalalka ugu habboon ee macaamiishayada sharafta leh.
Laynka qallajinta Double Roller Extrusion Compound Bacriminta Granulation Production Line Socodka socodka Flow
Qalabka cayriin batching (Mashiinka batching Static) ing qas (Disk fiicni) ran Granulating (granulator Extrusion) → Baadhitaanka (Rotary mashiinka baaritaanka durbaanka) ating Dahaarka (mashiinka daahan durbaanka Rotary) → xirxirida alaabta dhameystirtay (balastar tiro automatic) rage Kaydinta (keydinta meel qabow oo qalalan)
OGEYSIIS: Khadkan wax soo saarku waa tixraac kaliya.
Roll Extrusion Xarunta Bacriminta Granulator Muuqaal Video ah
Xulashada Iskuduwaha Isku-Darka Bacriminta Xulashada Qaabka
Ballaca walxaha (mm)
6-20N (Xoog burburin)
Hore: Mashiinka Gawaarida Isku-darka Isukeenista
Xiga: Nooca Cusub ee Granulator Bacriminta Dabiiciga ah
Hordhac Waa maxay Mashiinka Mashiinka Bacriminta BB? Mashiinka Bacriminta Mashiinka Mashiinka waa qalabka lagu soo daro nidaamka qaadista quudinta, birta birta ah ayaa kor iyo hoos u socota si ay u quudiso qalabka, oo si toos ah ugu sii daaya qasiyaha, iyo bacriminta isku-darka bacriminta iyada oo loo marayo farsamo gaar ah oo gudaha ah iyo qaab-dhismeed saddex-geesood ah oo gaar ah ...